ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: ကြွေ ရဲ သော ကြယ် များ ။
ကြွေ ရဲ သော ကြယ် များ ။
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: ကူးယူးဖော်ပြခြင်း, မြောက်ပိုင်းဒေသမှ လူမဆန်မှု
၁၉၉၀ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ ရက်တွေမှာပေါ့။
ရွေးချယ်စရာနည်းနေတဲ့ကြားက တော်လှန်ရေးတစ်ခုမှာ ပါဝင်ဖို့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရှိရာကို ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ဆိုတာ သပိတ်ကတည်းက အတွဲညီခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံး KIA ရင်း(၆)ကို လမ်းကြောင်းရှာထွက်ခဲ့ပြီးသူတွေလေ။ အဆက်အသွယ်လည်း ရ ထားပြီပေါ့။
တစ်ယောက်… တစ်ယောက် ပုတ်ချနေကြရဲ့။
“ပေါသွပ် မင်းမလိုက်သင့်ဘူး။မင်းက အမေအိုကြီးနဲ့ သားအကြီဆုံး။”
“မောင်မောင် မင်းမလိုက်သင့်ဘူး။ မင်းမိဘ သဘောမတူရင် မလုပ်သင့်ဘူး။”
“ကိုအေးမြင့် ခင်ဗျားက သစ်စက်လုပ်နေတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ပဲ လုပ်လိုက်မယ်။” စသဖြင့်….
ဒါပေမယ့် ပြောလို့လည်း မရကြပါဘူး။
“မင်းတို့လို ကျောင်းသားတွေကတောင် တိုင်းပြည်အတွက်စွန့်ကြသေးတာပဲ။”
“ငါကဘာလို့ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်မလုပ်ရမှာလဲ” တဲ့
သူတို့ (၇)ဦးကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ Lucky7လို့ ခေါ်တွင်လိုက်ကြသတဲ့။
အဲဒီမှာ ပေါသွပ်က အဆိုတခု ပြုတယ်။
“တချို့သေလိမ့်မယ်။ တချို့ကျန်မယ်” တဲ့။
အမှတ်တရ စေတီလေးဖြစ်ဖြစ် ကျောက်တိုင်လေးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်” တဲ့။
သူတို့ဟာ နောင်ရာပါမှာ အပတ်စဉ်(၆)စစ်ရေးသင်တန်းတက်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ဟာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ သင်တန်းသားတွေအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့တယ်။
ဂစ်တာတီးကောင်းကြသလို ဘော်လီဘောရိုက်လည်း ညီညွတ်ကြသတဲ့။
(အကျဉ်းသားဘ၀မှာတောင် တရားခံများအဖြစ် တစ်သင်းထွက်ပေးခဲ့ရသေးသတဲ့။)
ABSDF (ကချင်)အနေနဲ့ပဲ ဗဟိုကော်မတီအမည်ခံ လူတစ်စုက ကြီးစိုးနေချိန်
ABSDF (စစ်ကိုင်း)ဖြစ်မြောက်ရေးကလည်း ကြိုးပမ်းနေချိန်ပေါ့။
ABSDF (ကချင်)အုပ်စီးထားတဲ့ ကျောင်းသာတပ်မတော်ဟာ ဘယ်တော့မှ ABSDF (အထက်ဗမာပြည်) ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကြိုးပမ်းတဲ့သူ အသတ်ခံရမှာဆိုတဲ့ ဦးကျော်အုန်းတို့ အုပ်စု ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျောင်းသားများကတော့ ဂျိုးဖြူစစ်ကြောင်း(ရင်း-702)အနေနဲ့ ဥရုချောင်းဖက်ကို KIA 251နဲ့အတူ ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။
(သူတို့လည်း သီးခြားခွဲထွက်မှုနဲ့ အစုလိုက် အသတ်ခံရတာပါပဲ။)
ဒေသစွဲမရှိတဲ့သူတို့တစ်တွေကတော့ နောင်ရာပါစခန်းမှာပဲ သင်တန်းတက်ရင်းကျန်နေခဲ့ကြတယ်။
မောင်မောင် (ဒု-နှစ်၊IR မန္တလေးတက္ကသိုလ်)
ဒဿ (ခ)မောင်မောင်ခင် (ဒု-နှစ်၊ရူပဗေဒ၊ရွှေဘိုကောလိပ်)
ဖိုးဆန်း(ခ) ဆန်းဝင်း (ဒု-နှစ်၊ရူပဗေဒ၊ရွှေဘိုကောလိပ်) ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေပေါ့။
ကျော်ကျော်ဦးက တိုက်ခိုက်ရေးတပ်သား(ရင်း-11နယ်မြေ) အောင်မြင့်ထွန်းက တိုက်ခိုက်ရေးတပ်သား(ရင်း-6 နယ်မြေ) ကျော်ဇင်နဲ့ ဒဿ က ဗန်းမော်တပ်ရင်း ခရိုင်ရုံး
မောင်မောင်က ကွန်မန်ဒိုအထူးတပ်မှာ တာဝန်ယူခဲ့ကြတယ်လေ။
၉၁ ရှစ်လေးလုံး (၃)နှစ်မြောက်အပြီးမှာတော့ သူတို့ အားလုံးဟာထောက်လှမ်းရေးတဲ့
ဟုတ်သတဲ့၊ အားလုံးတညီတညွတ်ထဲ ဝန်ခံကြသတဲ့
ABSDF ဗဟိုက သံယောင်လိုက်သုံးတဲ့ သူလျိုဖော်ထုတ်ပွဲကြီးမှာ
ဖိုးဆန်းက သူငယ်ချင်းထောက်လှမ်းရေးတွေကို ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဘဝကနေ တာဝန်လဲပြီးရော.. သူလည်းထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ကရော…
ဗန်းမော်ခရိုင်ရောက်တုံး ကင်းတာဝန်ကျတဲ့ မောင်မောင် ကို ရေခပ်ဆင်းတဲ့အကျဉ်းသားဒဿက တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ ခွဲမှူးသက်ထွန်း အကဲခပ်နေတဲ့ကြားက “မောင်မောင် ငါတို့ ကိုထားခဲ့ မင်းပြေးတော့လို့”ရေခပ်ရင်းပြောပေမဲ့
သစ္စာရှိစွာအဖမ်းခံရင်း ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်ခဲ့
ဆေးကျောင်းလို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးတပ်သားသင်တန်းဆင်းတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး လူချစ်လူခင်များတဲ့ ကိုအေးမြင့်က “အမေရေ အမေ့သား ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပြီ”လို့ 
လှည့် အော်နေတုံး ဖမ်းလိုက်တော့လဲ ထောက်လှမ်းရေးပါဘဲ-
ခေါင်းအင်မတန်မာတဲ့ ကျော်ဇင် (ခေါင်းမပါဘဲ ပြန်ထောင်ထ မာနိုင်တဲ့ ရန်အောင်ကလွဲရင်)က အဖမ်းခံရပြီးချိန် အိမ်သာထွက်ချိန်မှာ သူ့ အသံကိုနားစွင့်ပြီး အတူလိုက်ထွက်လို့ ကျောချင်းဆိုင်ထိုင်ရင်း နှစ်မိနစ်လောက်ရတဲ့အချိန်မှာ
“ငါ့ကို အကုန်လွှဲချ ၊မင်းလွတ်အောင်ရုန်း’’ လို့ ကျွန်တော်ဆိုတော့ နောက်မှသိရတာ လွှဲမချရက်လို့ သူလည်းပါတယ်ဆိုပြီး ထောက်လှမ်းရေးဘဝနဲ့နေခဲ့
ဒဿ ကတော့ ကိုထိန်ပြောသလို ဒဏ်ရာအများဆုံးနဲ့လူသားပါပဲ။ တာဝန်ပေးလို့ ရွှေလီကို သံကြိုးနဲ့ နဂ္ဂတစ်သွားဝယ်ပြီး ပြန်ပြန်ချင်း အဖမ်းခံခဲ့ရသတဲ့။
သူ့ရဲ့ လွတ်မြောက်မှုအထိ အကျဉ်းစံရက်စက်မှုများနဲ့ ၈လနဲ့၅ရက်ကြာခဲ့သတဲ့။
Ok ပြောပြတာက ရေအိုက်မှာ ရေတွင်းလိုစက်သီးတန်းဆင် ခြေထောက်ကဇောက်ထိုးဆွဲ ရေထဲကို မျက်နှာနှစ်ပြီး ခေါင်းကိုနင်းထားတာတောင် ပြန်ပေါ်လာတိုင်း “ကျောင်းသားကွ”လို့အော်သတဲ့။
91 နိုဝင်ဘာလရဲ့ အအေးလှိုင်းဖြတ်ချိန်၊ နှင်းမုန်တိုင်းနဲ့ မိုးသီးတွေကျ၊နှင်းထုက မိုးရွာသလို တစ်ထွာတစ်မိုက်တက်တဲ့ (၁၀)နှစ်တစ်ကြိမ်ကြုံရတဲ့ ရာသီဥတုကြီးမှာ အ၀တ်မပါ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ နှင်းတောထဲပစ်ထားရင်း “ဟ မသေဘူးဟ၊ဆိုပြီး ရေတစ်ပုံးပြီးတစ်ပုံး နာရီဝက်ခြားပြီးလောင်းတာတောင် မသေတဲ့ဖိုးဆန်းကလည်း ထောက်လှမ်းရေးပါ တဲ့။
Lucky7တွေပဲ။
ကျော်ကျော်ဦးက ရင်း(၁၁)က အပြန် ဗဟိုမှာ စစ်ကြောရေးနဲ့ သေခဲ့ရ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် ခရစ်စမတ်ည မနက် ၄နာရီမှာ။ မနက် ၉နာရီကျတော့ မြုတ်ပြီးပါပြီ။ ကြွေလွင့် ကြယ်တစ်ပွင့်ပါ။
ပေါသွပ်(ခ)အောင်မြင့်ထွန်းကို တပ်ရင်း(၆) တစ်ညမှာ ဘာမှမေးမနေတော့ပဲ ဗဟိုအမိန့်နဲ့ ညတွင်းချင်း အခုတ်ခံ ခဲ့ရပါတယ်၊သူလိုပါဘဲ ရင်း(၆)အသတ်ခံ တစ်ခြားတစ်ဦးက အိန္ဒိယcampနဲ့ အဆက်အသွယ်ယူပြီးပြန်ရောက်တဲ့ရန်ရှင်း(မြင်းခြံ၊ရေဇင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား)ပါ၊သူ့ ကိုလဲ ညတွင်းချင်းပါပဲ… သတ်လိုက်ကြပြန်တယ်လေ၊ အော် - ကြယ်ပွင့်တွေကြွေပေါ့
မောင်မောင်နဲ့ ကိုအေးမြင့်က ပြည်ထောင်စုနေ့ မှာ ခေါင်းပြတ်ရတယ်
မဟုတ်မခံ မောင်မောင်နဲ့ ပါးစပ်သွက်တဲ့ အေးမြင့်ကိုအရှင်မထားရဲဘူးထင်ပ၊
ဘာခန္ဓာကိုယ် ချို့ ယွင်းချက်မရှိ၊ခြေပြတ်လက်ပြတ်မဖြစ်ဘဲ ထည့်သတ်လိုက်တာပေါ့
ဒဿ၊ကျော်ဇင်ဆိုရင် အချုပ်ကိုဦးဆောင်ပြန်စီးခဲ့တဲ့ သူတွေထဲက
ဖြစ်နိုင်ရင် ရဲဘက်အလုပ်စခန်းသုံး စူးကလေး၊ဆောက်ကလေးနဲ့ ကင်းစခန်းတစ်ခုလုံးကိုစီးလိုက်ချင်ပေမယ့်…
ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့ဖောယောင်ကိုင်းနေသူတွေ၊မိန်းကလေးတွေ၊သံခြေကျင်းမဖြုတ်ရသေး သူတွေကို ငဲ့ပြီးပြန်ဆုတ်ခဲ့ ရသတဲ့
ကိုထိန်ပြောသလိုပါဘဲ၊ပြန်ရောက်လို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်စာပေးစာယူတက်ကြတော့ ကျောင်းသားအရေးတစ်ခုမှာ သူတို့ ဟာ အခြားမသေသူ ok ၊ကံမြင့်ဦး တို့ နဲ့ ပွဲတက်ကြပြန်သတဲ့၊ တယောက်ကတက်တရားဟောလို့ ဝိုင်းဆွဲရသတဲ့…
ABSDFစစ်ဆေးရေး(သို့ )စစ်ကြောရေးဖွဲ့ ပြီးပြန်စစ်တော့မယ်၊ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ကြောင်း အသိသက်သေ(၂)ဦးရဲ့ထောက်ခံချက် လိုတယ်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်သွားတဲ့ ဦးဇင်းကြီးဒဿက ရီနေတယ်၊
ထပ်သတ်ချင်လို့ ထင်ပါရဲ့ တဲ့-
Lucky7တော်လှန်ရေးရဲဘော်ကြီးများ
ကြွေရဲပေမဲ့ ကြွေပုံကြွေနည်းများ မှားနေသလား မသိ
တခုခက်ရဲ့ ဘယ်မိဘကမှ မယုံရဲ၊မယုံချင် လက်မခံချင်ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက် ။
သူတို့ အတွက် ဆွမ်းမသွတ်ရတာ နှစ် နှစ်ဆယ် ရှိခဲ့ပေါ့ ။ အဲ…တခုတော့ရှိတယ် မောင်မောင်ကတော့ အစ္စလာမ်လေ ။
ပေါသွပ်ရေ … သိပ်မဝေးတော့ပါဘူးကွာ…
ထောင်ထဲမှာရော… အပြင်မှာပါ ကျိုးကြား ကျိုးကြား ဆွမ်းသွတ်ခဲ့ကြပေမယ့်
ငါတို့ တာဝန်တွေ ကျန်နေရဲ့…
နာရီဝက်ချင်း အသက်ရှင်အောင်မွေးတတ်ခဲ့တဲ့ တို့တွေ
မိသားစုတို့ရဲ့ စိတ်အခံကို အမှန်အမှန် ဆိုပြီး ပွဲ မခံ ရက်ဘူး
ဒို့တွေထဲက တစ်ယောက် ရှင်နေသရွေ့ …. တနေ့ပေါ့ ။
ရေးပြီးချိန်: 1/30/2012 09:25:00 PM
ကျွန်တော် သိခဲ့တဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် (သို့) ၈၈ ရဲ...
ငရဲပွက်ပမာ သေဆုံးသူတို့၏ AB မြောက်ပိုင်းမှအရိုးတွန...
Loss Of Innocence at the ABSDF (North) or အပစ်မဲ့ေ...
မြောက်ပိုင်းမြေမှ ပုံရိပ်များ ( အပိုင်း - ၁)
မြောက်ပိုင်းမြေမှ ပုံရိပ်များ ( အပိုင်း - ၂)
မအေးခဲသွားနိုင်တဲ့ မြောက်ပိုင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒ...
ကျွန်တော် လူကက်ဆက် - ဇာတ်သိမ်း (by ပန်းချီ ထိန်လင်...
ကျွန်တော် လူကက်ဆက် (by ပန်းချီ ထိန်လင်း )
ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ခဲ့စဉ်က (by ပန်းချီ ...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း - ၇ ) ...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း - ၆ ) ...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း - ၅ ) ...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း - ၄ ) ...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း - ၃ ) ...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း - ၂ ) ...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း - ၁ ) ...